2019 CNS ကုသမှုမူးယစ်ဆေး GM1 ဝက်ဦးနှောက် (37758-47-7) - APICMO
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိပညာ > 2019 CNS ကုသမှုမူးယစ်ဆေး Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ် (GM1) ဝက်ဦးနှောက် (37758-47-7)
Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ်သည်အဘယ်သူ၏အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ neurotrophic အာဟာရဖြစ်ပါတယ် GM1.
Gangliosides သကြားကွင်းဆက်အပေါ် sialic အက်ဆစ်ကျန်ကြွင်းအတူ glycosphingolipid ၏ပါဝင်သော ganglio စီးရီး၏အတန်းပိုင်။ အဆိုပါ sialated polysaccharide ကွင်းဆက်တစ်β-glycosidic ချိတ်ဆက်မှတဆင့် ceramide နှင့်အတူချိတ်ဆက်။ သူတို့အာရုံခံ plasmic အမြှေးပါးအတွင်းဒါပေမယ့်လည်း endoplasmic reticulum အတွက်ဖွဲ့စည်းကြသည်သာ။
သူတို့ကဦးနှောက်၏စုစုပေါင်းအလေးချိန်၏ 0.1% တက်သည်ကိုလုပ်သော်လည်း, gangliosides ခြုံငုံ lipids နီးပါး 10% နေရာယူထားသည်။ သူတို့ဟာဆဲလ်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်း, apoptosis, အာရုံကြောနှင့် neurotrophins များလွှတ်ပေးရန်သွေးဆောင်။
Monosialotetrahexosylganglioside တစ်ခု oligosaccharide ကွင်းဆက်များနှင့် ceramide ပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးအချိုးအစားမညီမျှမှုဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမော်လီကျူးနှစ်ခုလုံး hydrophilic နှင့် lipophilic ဂုဏ်သတ္တိများထားပါတယ်။ ရေနှင့်အဆီထဲမှာပျော်ဝင်ဖြစ်ခြင်း, Monosialotetrahexosylganglioside အလွယ်တကူသွေးသည်ဦးနှောက်အတားအဆီးမှတဆင့်သွားလာနိုင်ပါတယ်။
Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ် GM1 ဦးနှောက်အတွက်အရေးပါသည့်ဇီဝကမ္မအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ထိုသို့သောဒဏ်ရာပြီးနောက်အာရုံကြောပျက်စီး, functional ဖြစ်စေပြန်လည်နာလန်ထူနှင့်အာရုံခံ၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးပြုပြင်အဖြစ်အာရုံကြောဂုဏ်သတ္တိများထားပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ်ဗဟိုအာရုံကြောဒဏ်ရာကုသမှုအတွက်အသုံးဝင်သည်။ ဆက်စပ်ရာဝေဒနာတွေ၏အချို့ cerebrospinal စိတ်ဒဏ်ရာ, cerebrovascular ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်စိတ်ထိခိုက်အာရုံကြောဆဲလ်ဒဏ်ရာပါဝင်သည်။ အာရုံကြောဆဲလ်ပျက်စီးမှုကိုအရပ်၌ကြောင့်ပိုပြီးအာရုံစိုက်နေပါတယ်။
Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ် (GM1) ၏သမိုင်း
အဆိုပါ GM1 ၏လေ့လာမှုနှင့်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ အာရုံကြော နောက်ကျော 1970s မှစတငျ။ ထိုအချိန်မှစ. သုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်များဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများထွက်တင်ဆောင်သဖြင့်ဝင်းအတွင်းတွင်အကျိုးစီးပွားပြသခဲ့ကြသည်။ လူအားလုံးတို့သည်စမ်းသပ်ချက် neurodegenerative မမှန်အတွက် GM1 ၏အရေးပါမှုကိုထူထောင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
1986 ခုနှစ်, TRB လုပ် SA မှတဆင့် Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ်တရားဝင်ကုန်သွယ်မှုအမည်, GM က-1 အောက်တွင်စတင်ခဲ့ခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအပေါ်ရလဒ်ကတိပေးခဲ့ပေးထား, အမေရိကန် Clinician လူ့အပေါ် Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ် (GM1) သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ထွက်ထားကြ၏။ လေ့လာမှုများ၏ဘာသာရပ်များအတွက်ကျောရိုး၏ဒဏ်ရာကြောင့် CNS ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူလူနာလေဖြတ်ခြင်း, ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ခဲ့ကြ အယ်လ်ဇိုင်းမား.
Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ်(GM1) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
CAS အမှတ် 37758-47-7
IUPAC အမည် (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-[(E,2R,3S)-3-hydroxy-2-(icosanoylamino)icos-4-enoxyl]-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid
အရည်ပျော်မှတ် 207 - 230 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
မော်လီကျူး Mass 1546.841 gmol-1
· Methanol / chloroform အတွက်အနည်းငယ်ပျော်ဝင်
ပုံပန်းသဏ္ဍာန် Off-အဖြူ lyophilized အမှုန့်မှအဖြူရောင်
pH 5.0 မှ 6.5
နာမ် · Monosialoganglioside GM1
Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ်(GM1) လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
Monosialotetrahexosyl ganglioside အများအပြားနည်းလမ်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါမော်လီကျူးအာရုံကြောစနစ်၏ဇီဝကမ္မလှုပ်ရှားမှုများအများစု၏ဗဟိုသည်။
ဦးနှောက်ရဲ့ဆဲလ်အမြှေးပါး၌, Monosialotetrahexosylganglioside လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအမြှေးပါးတစ်သျှူးအတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်အိုင်းချိန်ခွင်လျှာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့။ က impermeability မြှင့်တင်ရန်, ဒါပေမယ့်လည်းထွက် evens ဆိုဒီယမ်နဲ့ကယ်လ်စီယမ်အိုင်းယွန်းစုပ်ပေသာ။
အာရုံကြောဒဏ်ရာ၏အမှု၌, Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ် (GM1) အမြှေးပါးဖွဲ့စည်းပုံကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်လာပါတယ်။ ဒါဟာ phospholipase A2 ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကဆင်း trims အလယ်အလတ်ဟာကယ်လစီယမ်အိုင်းယွန်းရောက်လာနှင့်အခမဲ့အစွန်းရောက်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုဆင်းလျှော့ချနိုင်သည်။
ဦးနှောက်စိတ်ဒဏ်ရာ apoptosis တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည်သောဆဲလ်အတွင်းရှိပရိုတိန်း kinase များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုချဲ့ထွင်။ GM1 ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့် cytoplasm နှင့်နျူကလိယအတွင်းပရိုတိန်း၏ဇီဝြဖစ်ကိုင်ပြီးအားဖြင့်ဤဖြစ်စဉ်နောက်ကြောင်းပြန်။
အဆိုပါ mitochondrion အတွင်းမှာပဲ Monosialotetrahexosylganglioside သည့် ATP ထုတ်လုပ်မှုနှင့်၎င်း၏ synthase လှုပ်ရှားမှု upregulate မှအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအီလက်ထရွန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွင်းဆက်အပေါ်ပြုပြင်ရေးဖြစ်နိုင်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် oxidative phosphorylation ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ဦးနှောက်ရဲ့ mitochondrial အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ function ကိုကျန်းမာနေဆဲဖြစ်သည်။
Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ်ဆေးထိုးသူတို့ရဲ့သီးခြား receptors ဖို့ကြီးထွားအချက်များကိုအာရုံအားဖြင့်ပေါက် axon လှုံ့ဆော်။ ဤသည်လှုပ်ရှားမှုအာရုံကြောအမျှင်မျာကိုပြန်လည်နှင့်လျင်မြန်စွာအာရုံကြောပြန်လည်နာလန်ထူအားပေးအားမြှောက်။ အလယ်တန်းယိုယွင်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, ဖြစ်ကောင်းကြောင့် dopamine အာရုံခံဆဲလျပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရန်, Monosialotetrahexosylganglioside အကျိုးသက်ရောက်မှုတည်ငြိမ်နှင့်ဤအာရုံခံ၏ရှင်သန်မှုကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
Monosialotrahexosylganglioside Solidum (GM1) အကျိုးသက်ရောက်မှု
gangliosides ဦးနှောက်ထဲမှာအနည်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း, သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားမော်လီကျူးအာရုံကြောအမျှင်များ၏ကြီးထွားမှု, ပွနျလညျ, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိသည်။
GM1 အသက်အရွယ်နှင့်အတူငြင်းပယ်။ အိုမင်းဦးနှောက်, အလင်းမူးဝြေခင်း, မတော်တဆအာရုံကြောဒဏ်ရာ, ဒါမှမဟုတ်မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှု၏အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အပြင်ပြင်းထန်ဟောင်း-အသက်အရွယ်ထိုကဲ့သို့သောနှောက်လက်ခြေသေသောသူအဖြစ်ရောဂါများ, လေဖြတ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်-up, pop နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
exogenous GM1 ၏အချိန်မီဖြည့်စွက်အိုမင်း syndrome အများစုစီမံခန့်ခွဲကူညီပေးသည်။ အပြုသဘော Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ် (GM1) သက်ရောက်မှု၏အချို့အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ, လေဖြတ်ခြင်း, ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်ဦးနှောက်သွက်ချာ၏ကုသမှုပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်အိုမင်းနှေးကွေး မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်အောင်.
လက်တွေ့ပလီကေးရှင်း GM1 များအသုံးပြုမှုအတော်လေးကျယ်ပြန့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အတော်ကြာဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင် CNS ရောဂါများကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ်ဆေးထိုးတာခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါဖြည့်စွက်အာရုံကြောဆဲလ်တွေကိုဦးနှောက်တစ်ရှူးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အာရုံကြောရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၏တိုးတက်မှုမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကုထုံး, ဒီ exogenous မော်လီကျူးကဦးနှောက်ရောဂါ ischemic ဒဏ်ရာ, ဦးနှောက်သွေးသွန်ခြင်း, စိတ်ထိခိုက်အာရုံကြောဆဲလ်ဒဏ်ရာဆကျဆံတယျ။
လူသားမြားသညျပေါ်မှာဤဒြပ်ပေါင်းများ၏လေ့လာမှုနှင့်လျှောက်လွှာအတွက်အရေးပါဆုံးသောအောင်မြင်မှုများအဘယ်သူမျှမထိခိုက် Monosialotetrahexosyl ganglioside ဆိုဒီယမ် (GM1) သက်ရောက်မှုရှိထွက်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
GM1 သက်ရောက်မှုမျှသာထင်မြင်ချက်မရှိကြပေ။ 1976 ခုနှစ်, Ceccarelli exogenous gangliosides အလယ်ပိုင်းနှင့်အရံအာရုံကြောသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ပျက်စီးဆဲလ်၏ပြုပြင်သွေးဆောင်ကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် GM1 ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာစိတ်ဝင်စားမှုပြတဲ့သူပညာရှင်များအဘို့အစိုင်အခဲအုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်။
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ၏ရမှတ်များ Monosialotetrahexosylganglioside ကြီးထွားမှု, ကွဲပြားခြားနားမှု, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်, အာရုံကြောဆဲလ်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းအတည်ပြုပါ။ ထိုမှတပါး, လေ့လာမှုများအာရုံကြော, neuroplasticity နှင့် Synaptic ဂီယာအတွက် GM1 ၏ထိရောက်မှုကို back up ။
စိတ်ဒဏ်ရာ၏ဖြစ်ရပ်မှာ exogenous Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ်ဆေးထိုးတာအတော်ကြာနည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါမော်လီကျူးအာရုံကြောဆဲလ်များ၏ dendritic မျိုးဆက်လှုံ့ဆော်ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုနှုန်းကိုတိုးပွါးစေသာ။ ဒုတိယအသည်ဖြည့်စွက်ပြုပြင်, ပွနျလညျနှင့် functional ဖြစ်စေပြန်လည်နာလန်ထူတစ်သိသိသာသာအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။
Monosialotrahexosyl Ganglioside Solidum (GM1) ထုတ်ယူ Method ကို
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိ Monosialotetrahexosyl ganglioside သဘာဝကျကျ-ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတည်းသော CNS ကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမော်လီကျူး endogenously နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏အာရုံကြောဆဲလ်အမြှေးပါးအတွင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ganglioside အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်အာရုံကြောတစ်ရှူးအတွက်၎င်း၏ကြွယ်ဝသောအကြောင်းအရာ, သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် Clinician ဆေးဖက်ဝင် monosialotetrahexose ganglion ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက် extract အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ကျနော်တို့နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဆဲလ်ကနေ Monosialotetrahexosyl ganglioside extract လုပ်ပါ။ သင်တစ်ဦးသည်နွားတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆိတ်သငယ်ကိုအထဲကမော်လီကျူးခွဲထုတ်နိုငျသျောလညျးအလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းဝက်ဦးနှောက်ထုတ်ယူသည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်နှားဆိတ်ထိုကဲ့သို့သောအရူး-နွားမရောဂါနှင့်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါအဖြစ်လိမ့်မည်အများဆုံးဖွယ်ရှိလွှဲပြောင်းကူးစက် prions မှ Monosialotetrahexosyl ganglioside ထုတ်ယူသည်။
Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ် (GM1) ဓာတ်ခွဲခန်းထုတ်ယူခြင်းများအတွက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ, လက်လှမ်းအကျိုးရှိစွာနှင့်ချွေတာရှိပါတယ်။ အဆိုပါနည်းလမ်းကိုလူသားကူးစက်မှု transmit မကျွန်တော်တို့သည်ဝက်ဦးနှောက်ကနေလုံခြုံဆုံးနှင့်သန့်စင်သော GM1 အတူသင်တို့သည်။
မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းအဘို့, ကျနော်တို့ chloroform-Methanol-ရေထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။ ထိုနောက်မှကျနော်တို့အနေနဲ့ anion လဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရွယ်အစားဖယ်ထုတ် chromatographic ခွဲခြာထွက်သယ်ဆောင်။ ဤသည်သန့်စင် HPLC မှတဆင့်> 98% သန့်စင်သောအရာတစ်ဦးတသားတည်းမော်လီကျူး, တွေ့ရကြ၏။
အဆိုပါ Monosialotetrahexosyl ganglioside သက်ရောက်မှုလက်တွေ့ applications များသိသိသာသာရှိပါတယ်။ ဒါဟာအာရုံကြောချို့ယွင်းနှင့်ဗဟိုအာရုံကြောဒဏ်ရာကုသမှုကိုစီမံခန့်ခွဲတစ်ခုအတည်ပြုဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကုထုံးအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက် GM1 ဝယ်ဖို့ချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့ High-grade ကိုကုန်ပစ္စည်းအာမခံပါသည်။ ကျနော်တို့အသံအတိုးအကျယ်-အသီးအနှံ Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ် (GM1) အမှုန့် အတည်ပြုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများအောက်တွင်။
Schneider, JS, Roeltgen, DP, et al ။ (1998) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ: တစ်ကျပန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ-ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုအတွက် GM1 Ganglioside ကုသမှုနှင့်အတူတိုးတက်ကောင်းမွန်သောရာထူးအမည်။
Bansal, AS, Abdul-Karim က, ခ, Malik, RA, et al ။ (1994) ။ IgM Ganglioside GM1 Autoimmune ရောဂါသို့မဟုတ် Neuropathy နှင့်အတူလူနာအတွက် antibody နှင့်ထိန်းချုပ်မည်။ ဂျာနယ်လက်တွေ့ရောဂါဗေဒ။
Mocchetti, ဗြဲ (2005) ။ Exogenous Gangliosides, အာရုံခံပလပ်စတစ်နှင့်ပြုပြင်ခြင်း, နှင့် Neurotrophins ။
Aurelie, အမ်, Mauri, အယ်လ်, Ciampa, MG, Prinetti, အေ, Toffano, G. အ, et al ။ (2016) ။ GM1 Ganglioside: အတိတ်လေ့လာရေးနှင့်အနာဂတ်အလားအလာ။ မော်လီကျူး Neurobiology ။
Bian, အယ်လ်, ယန်, ဂျေ, နဲ့ Sun, Y. (2015) ။ Extraction နှင့်အရည် Chromatography နေဖြင့်ဝက်ဦးနှောက်ထဲကနေအထီးကျန်မှုတွေနဲ့ Monosialotetrahexosylgangliosides ၏စင်ကြယ်။
လွန်ခဲ့သော Previous post: သင်က Pyridines အကြောင်းသိထားဖို့လိုအားလုံး